Ihe nkiri nrapado na -ekpo ọkụ
Mpempe akwụkwọ mkpuchi agba ụgbọ ala
Enweghị nsogbu Underwear
Label Nyefee Okpomọkụ
Igwe nju oyi Evaporator
Ịchọ Mma n'ime Nchekwa onwe
Akpụkpọ ụkwụ Ihe Lamination
Badge a kpara akpa
Ọkụ retardent Series
Teepu ngosipụta ọkụ
Hehe na -ekerịta, na -akpọ gị òkù isonye na ihe ngosi ihe nkiri na teepu mba ụwa nke Shenzhen nke 2021!
site na nchịkwa na 21-10-18
Ọktọba 19-21, 2021 Shenzhen Mgbakọ na Ebe ngosi (Old Exhibition Hall na Futian District) Nabata n'ụlọ ntu ahụ ka ị gaa tụgharịa Booth 1Y08 Jiangsu Hehe New Materials Co., Ltd. Jiangsu Hehe New Material Co., Ltd. sitere na 2004 Ọ bụ ụlọ ọrụ ọhụrụ ewepụtara maka ...
Ihe nkiri H&H na -agbaze agbaze agbaze ọkụ: Mmetụta nke oke okpomọkụ nke igwe mejupụtara na mmetụta ojiji nke nmente nzere na -ekpo ọkụ
site na nchịkwa na 21-10-13
Anyị niile maara na nrapado na-agbaze agbaze anaghị agbanwe agbanwe na oke ụlọ. Mgbe etinyere ya na ihe mejupụtara, ọ dị mkpa ka agbaze ya site na ịpị ọkụ ọkụ dị elu tupu ọ nwee ike bụrụ viscous! Akụkụ atọ dị oke mkpa na usoro mkpokọta niile: ọnọdụ okpomọkụ, oge na tupu ...
Hehe na -ekerịta, na -akpọ gị òkù isonye na akwa akwa akwa akwa na ngwa (mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri) nke China na 2021!
Site na Ọktọba 9 ruo 11, 2021, a ga -eme ihe ngosi akwa akwa akwa na ngwa (China na mgbụsị akwụkwọ) nke 2021 na Shanghai National Center na Ngosi ihe ngosi. Hehe Stock Booth Nke 2.2 Ụlọ Nzukọ K72! Nabata ndị enyi ọhụrụ na ndị ochie ileta ụlọ ntu ahụ! Nkọwapụta ụlọ ọrụ Jiangsu ...
Ihe nkiri H&H na-agbaze agbaze agbaze: Anyị ga-eme ememme ndị China ọdịnala-Ememme etiti mgbụsị akwụkwọ
site na nchịkwa na 21-09-18
Ememme etiti mgbụsị akwụkwọ, nke a makwaara dị ka Ememme Ọnwa. Kemgbe oge gboo, ememme etiti mgbụsị akwụkwọ enwela omenala ndị mmadụ dịka ife ọnwa, ịmasị ọnwa, iri achịcha ọnwa, iji oriọna egwu egwu, ịmasị okooko osisi osmanthus, na ị drinkingụ mmanya osmanthus. Anyị ga -eweta ChinaR ...
Nhọrọ nke ihe nkiri nrapado na -ekpo ọkụ maka nrapado na nkọwa nkọwa
Dị ka nrapado ụlọ ọrụ dị ezigbo mkpa, ihe nkiri na -agbaze agbaze agbaze na -arụ ọrụ dị mkpa n'akụkụ niile nke ndụ. A na -eji ihe nrapado na -ekpo ọkụ na -agbaze agbaze, yana isi ọrụ ya bụ imezu njikọta ngwaahịa a. Na mgbakwunye na njikọta ngwaahịa a, ọ nwekwara ike ...
Uru nke Eva Hot Agbaze Nrapado Ihe Nkiri
site na nchịkwa na 21-09-15
Ihe nkiri na-agbaze agbazere agbazere nke Ethylene Vinyl Acetate Copolymer mere nke dabara maka ijikọ akwa, akwa, ihe akpụkpọ ụkwụ, foil alumini, Mylar, PET, PP, Mpekere ụfụfụ EVA, akpụkpọ anụ, akwa na-enweghị akwa, osisi, akwụkwọ, wdg. Ọ nweghị akwụkwọ mwepụta na -eweta ọnụahịa dị ala karịa nke ahụ w ...
Enwere ike ijikọ ihe ogbo ahụ na nrapado na -agbaze agbaze?
site na nchịkwa na 21-09-14
Mgbe ọ bụla anyị na -ekwu maka ogbo, ekwenyere m na onye ọ bụla maara ya. Ogbo bụ ihe a na -ahụkarị na ndụ kwa ụbọchị, enwere ọtụtụ ohere maka onye ọ bụla ịbịakwute ya, ụfọdụ ndị na -ejikwa ya kwa ụbọchị. Ọtụtụ ngwaahịa sponge abụghị naanị sọji ihe dị ọcha, kama ọ na -agwakọta ...
Mmetụta nke igwe ọkụ dị elu nke ngwakọta ngwakọta na ojiji ojiji nke nze nrapado na -ekpo ọkụ
site na nchịkwa na 21-09-13
Anyị niile maara na ihe nkiri na -agbaze agbaze agbaze anaghị apụ apụ n'ime ụlọ. Mgbe etinyere ya na ihe mejupụtara, ọ dị mkpa ka agbaze ya site na ịpị ọkụ ọkụ dị elu tupu ọ nwee ike bụrụ viscous! Akụkụ atọ dị oke mkpa na usoro mkpokọta niile: ọnọdụ okpomọkụ, oge na tupu ...
Uru na ọghọm dị n'iji ihe nrapado na -agbaze agbaze agbaze
site na nchịkwa na 21-09-10
1. Ezigbo iku ume Ndị jirila ihe nrapado na-agbaze agbaze maka ịgbakọ ọnụ kwesịrị ịma na ikuku ikuku nke ihe nrapado na-agbaze adịchaghị mma. Maka akụrụngwa ma ọ bụ ụlọ ọrụ na -achọ ikuku ikuku dị elu, ihe nrapado na -agbaze agbaze adịghị mma. Agbanyeghị, agbazere agbaze ...
Kedu ka esi eji ihe nrapado na -agbaze agbaze?
site na nchịkwa na 21-09-09
Kedu ka esi eji ihe nrapado na -agbaze agbaze? Banyere iji ihe nrapado na -agbaze agbaze agbaze, enwere ike kewaa ya n'ọnọdụ abụọ. Otu bụ iji mmepụta nke na-abụghị oke: dị ka ojiji na obere mpaghara, yana iji na obere ụlọ ahịa nwere ihe nhazi (dị ka ụlọ ahịa ákwà ngebichi); ọnọdụ nke abụọ bụ ...
Ihe nkiri H&H na -agbaze agbaze agbaze: Nrụgide ụlọ nrụzi
Ebe ọ bụ na enwere ikpe ebe kabinet enweghị ngwongwo niile n'usoro, onye ahịa rịọrọ anyị ka anyị jupụta ya n'oge a, ma rịọ anyị ka anyị chepụta otu atụmatụ maka iburu kabinet. Otu esi ahazi igbe ndị ahụ n'ụzọ ezi uche dị na ya iji bulie ọrụ kabinet na ibu ọtụtụ ngwongwo. Mbụ ...
Ihe nkiri nrapado na-agbaze agbaze na ihe nrapado onwe ya bụ otu nrapado?
Ihe nkiri nrapado na-agbaze agbaze na ihe nrapado onwe ya bụ otu nrapado? Ma ihe nrapado na-agbaze agbaze na ihe nrapado bụ otu ngwaahịa, ajụjụ a yiri ka ọ na-enye ọtụtụ mmadụ nsogbu. N'ebe a, m nwere ike ịgwa gị nke ọma na ihe nrapado na-agbaze agbaze na nrapado onwe abụghị otu ngwaahịa nrapado. Ọ ...
123456 Ọzọ> >> Peeji 1 /6
Okwu: 111, Owuwu 5, No.1101, Huyi Road, Nanxiang, District Jiading, Shanghai, China
Adreesị ụlọ ọrụ: obodo Qidong, Jiangsu Province
Ìgwè mmadụ: +86 18512142852 / + 86 13358078959